PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-28 - Silengelwa yizembe isikhulu sokhozi
Silengelwa yizembe isikhulu sokhozi
Ilanga langeSonto - 2018-10-28 - Front Page - Sithole incwadi
LILENGELA eweni ikusasa lesikhulu sesikhondlakhondla somsakazo, Ukhozi FM, okuthiwa sinikezwe yiSABC incwadi emayelana nokuphenywa kwaso ngezinsolo ezithile zokungaziphathi kahle emsebenzini.
Nakuba ILANGA Lange-sonto lingatholanga kahle hle imininingwane equkethwe yile ncwadi kodwa imithombo ehlukene ikuqinisekisile ukuthi uzandile Tembe, onguMphathi wezinhlelo, kulesi siteshi uyitholile futhi ishubile, ingase ilandelwe wukuxoshwa kwa- khe.
Omunye wemithombo uthe bese kunesikhathi kuvela ukuthi kunophenyo olwenziwayo ngozandile.
Kulezi zinsuku ukhozi FM lusematheni selokhu kuxoshwe ungizwe kanti nesimo kuthiwa asimnandi neze ngaphakathi.
“Engingakusho wukuthi kushubile kakhulu selokhu kuxoshwe ungizwe njengoba bese kunezinhlangothi ezihambisana nabaphathi abathile,” kusho lo mthombo othi kungenzeka liphinde ligawule nakwabanye izembe.
Omunye umthombo, ozazi kahle ezangaphakathi kulo msakazo futhi nawo oyiqinisekisile indaba yokunikwa incwadi kukazandile, uthe ukuxoshwa kukangizwe sekulwenze lwahlala obala uqhekeko olukhona kulesi siteshi somsakazo.
Okhulumela I-SABC, unkz Neo Momodu, akazange awuphendule umbuzo waleli phephandaba mayelana nale ncwadi okuthiwa inikezwe uzandile.
Kunalokho uthe uzandile uyisisebenzi sale nhlangano futhi bayayihlonipha inkontileka yomsebenzi ephakathi kwakhe NESABC.
Uqhube wathi ngeke akwazi ukudalula emphakathini okuqukethwe yinkontileka yomsebenzi kaZandile NESABC.
ISIKHULU sokhozi FM, unkz Zandile Tembe.